Ratsy ve ny tranokala milaza ny isan'ireo mpitsidika azy ireo? | Martech Zone
Ratsy ve ny tranokalan'ny toerana noho ny hamaritan'ny mpitsidika azy ireo?
Alakamisy, Jona 7, 2007 Sabotsy, Janoary 6, 2018 Douglas Karr
ComScore vao namoaka ny Taratasy fotsy amin'ny famafana ny cookie. Cookies dia rakitra kely izay idiran'ny pejin-tranonkala hamonjy vaovao ao amin'ny marketing, analysis, Analytics, ary hanampiana amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Ohatra, rehefa manamarina boaty ianao raha tehirizina ny mombamomba ny fidirana amin'ny tranokala, dia voatahiry ao anaty Cookie izy io ary miditra amin'ny fotoana hanokafanao izany pejy izany.
Inona no atao hoe mpitsidika tokana?
Ho an'ny tanjona fandinihana, isaky ny mametraka cookie ny pejy web iray dia asiana mpitsidika vaovao. Rehefa miverina ianao dia hitan'izy ireo fa efa teo ianao. Misy lesoka miavaka roa miaraka amin'ity fomba ity:
Ireo mpampiasa dia mamafa ny Cookies… betsaka lavitra noho izay noeritreretinao.
Ilay mpampiasa iray ihany dia miditra amin'ny tranokala avy amin'ny solosaina na mpizaha maro.
Ireo tranokalam-baovao isam-paritra dia afaka manome vola an'ireo mpanao dokambarotra mifototra amin'ny fampahalalana toy izao. Raha ny marina, ny Gazety Indianapolis eo an-toerana dia milaza,
IndyStar.com no loharanom-pahalalana nomerika Indiana laharana 1 ho an'ny vaovao sy ny vaovao, nahazo pejy 30 tapitrisa mahery, Mpitsidika tokana 2.4 tapitrisa ary 4.7 tapitrisa fitsidihana iray volana.
Ka ohatrinona ny isa hamafana ny cookie amin'ny isa?
Ny valin'ny fandalinana dia nampiharihary fa 31 isan-jaton'ny mpampiasa solosaina amerikana no nanadio ny bisikiletan'izy ireo voalohany tao anatin'ny iray volana (na nodiovin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko mandeha ho azy), miaraka amin'ny salan'isa 4.7 isan-karazany ny cookies hita ho an'ny tranokala mitovy ao anatin'ity ampahan'ny mpampiasa ity . Ny fanadihadiana tsy miankina notarihin'ny Belden Associates tamin'ny 2004, nataon'i JupiterResearch tamin'ny taona 2005 ary nataon'i Nielsen / NetRatings tamin'ny 2005 dia namarana ihany koa fa ny cookies dia voafafan'ny 30 isan-jaton'ny mpampiasa Internet farafaharatsiny tao anatin'ny iray volana.
Ny fampiasana ny santionan'ny tokantranon'i comScore US ho toy ny base, iray eo ho eo ny cookies miavaka 2.5 voamarina isaky ny solosaina ho an'ny Yahoo! Ity fikarohana ity dia manondro fa, noho ny famafana ny cookie, ny rafi-pandrefesana mifototra amin'ny mpizara izay mampiasa cookies mba handrefesana ny haben'ny tobin'ny mpitsidika iray dia mazàna manasongadina ny isan'ny mpitsidika tsy manam-paharoa amin'ny isa hatramin'ny 2.5x, izany hoe fihoarana mihoatra ny 150 isan-jato. Toy izany koa, ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny rafitra mpizara doka izay mampiasa cookies hanarahana ny tratra sy ny fahita matetika amin'ny fampielezana doka an-tserasera dia hahatratra mihoatra ny 2.6x sy ny fahita matetika amin'ny ambaratonga mitovy. Ny tena halehiben'ny fandanjalanjana dia miankina amin'ny fahita matetika amin'ny fitsidihana ny tranokala na ny fahitana ny fampielezan-kevitra.
Araraotina ve ny mpanao dokambarotra?
Angamba! Raiso ny tranokala toy ny tranonkalam-baovao eo an-toerana ary izany isa 2.4 tapitrisa izany dia milatsaka avy hatrany amin'ny mpitsidika iray tapitrisa eo ho eo. Ny tranokalam-baovao dia tranonkala iray izay matetika mitsidika azy, ka io isa io dia mety ho ambanin'io. Ampio izao ny isan'ny mpamaky mitsidika ny tranokala any an-trano sy any am-piasana ary mandatsaka isa lehibe hafa ianao.
Ity dia olana ho an'ny vahoaka 'eyeballs' taloha. Na dia mivarotra amin'ny isa aza ny olona mpivarotra dia mety ho vitsy kokoa ny mpitsidika azy ireo noho ny haino aman-jery mifaninana. Mazava ho azy, tsy misy fomba tena 'hamahana' ny olana. Na dia misy manam-pahaizana momba ny tranonkala manana antsasaky ny ati-dohany aza manaiky fa izany no izy, tsy manandrana milaza aho fa manadinika ny isany ireo tranonkala. Tsy fanahy iniana milaza ny statistikan'izy ireo izy ireo… fa ny statistikan'ny fenitra indostrialy fotsiny no tateriny. Antontan'isa izay tena tsy azo atokisana.
Toy ny programa marketing tsara rehetra, mifantoha amin'ny valiny fa tsy amin'ny isan'ny eyeballs! Raha ianao dia mampitaha ny taha eo amin'ny karazana haino aman-jery, mety te hampihatra matematika haingana ianao mba hahafahan'ny tarehimarika hitombo kokoa!
Tags: isa dokadokam-barotrafanisana dokam-barotracomscorefamafana cookieisan'ny mpitsidika
Ny fangatahana MySQL momba ny fisarihana sokajy ao amin'ny WordPress
Google Adwords, Adsense ary Google Maps?
8 Jiona 2007 à 1:48
Angamba amin'ny ho avy dia misy zavatra manaraka ny andalana CardSpace hanazava ity olana ity. Na izany aza, mety ho lasa Big Brother loatra. Tsy maintsy miandry fotsiny isika.
8 Jiona 2007 à 8:32
hoy ianao, tsy misy fomba marina hamaritana ireo mpitsidika tokana amin'ny tranokala iray.
tsy azo itokisana ny cookies ary ankehitriny dia maro ny olona mampiasa flash ho an'ny fitehirizana ny lafiny mpanjifa.
Fa ho an'ny mpanao dokambarotra, ny fijerena pejy no zava-dehibe. Mora ny mamaritra tsara ny isan'ny impiry ny doka iray 🙂
Ary avy eo, serivisy statistika tranonkala maro no manana olana manokana. Ny tranokalan'ny antontan'isa mivantana toy ny statcounter dia handinika mpampiasa voafetra amin'ny fotoana iray.
Google analytics dia tsara kokoa amin'ity, fa indraindray mila miandry 2 andro aho vao mahazo ny tatitra farany 🙁
Tsy tafahoatra loatra izany
Jun 9, 2007 ao amin'ny 4: 00 PM
"Ny salan'isa 2.5 cookies miavaka dia voamarika isaky ny solosaina ho an'ny Yahoo!"
Firy ny isan'ny mpampiasa Yahoo isaky ny solosaina ao an-tokantrano? Eny, eo amin'ny 2 na 3 angamba. Fantatro fa tsy mitsahatra miala amin'ny vadiko aho mba hanamarinako ny kaontiko, na ao amin'ny Yahoo izany na Google, Schwab na tranonkala hafa.
Ao an-tranonay, sendra manana PC 4 sy Mac an-tserasera izahay eo anelanelan'ny olon-dehibe 2, ka mitranga izany na manana solosaina iray ianao na maro.
Raha manana tranokala reg ianao ary misy logiciel ny mpizara anao dia manaova tatitra momba ny anaran'ny adiresy IP tsirairay. (io dia mampiseho hoe firy ny olona mizara solosaina/manana kaonty dup). Avy eo manaova tatitra izay mampiseho ny isan'ny IP nipoiran'ny anarana tsirairay. (Izany dia mampiseho fa a) ips averin'ny isps ary b) miditra avy amin'ny toerana maro ny mpampiasa. )
Eny, marina ny isa 2.5. Tsy hosoka, tsy tafahoatra, marina. Tsy misy tantara eto. Mandrosoa izao.
Jun 9, 2007 ao amin'ny 4: 25 PM
Ny lahatsoratra nosoratana dia tsy miresaka momba ny olana momba ny fidirana/fisoratana anarana momba ny cookies, fa resaka cookie famafana ary ny fiantraikany amin'ny fijerena pejy tsy manam-paharoa. Yahoo! tsy mamafa cookies rehefa mivoaka sy miditra ianao.
Ny olana dia ny 30%-n'ny tokantrano no MAMAFA ny mofomamy, ka ianao no hita ho mpitsidika vaovao… fa tsy olon-kafa ao an-tokantrano. Mba vakio azafady ny lahatsoratra raha mila fanazavana lalindalina kokoa.
Ny ohatranao ihany koa no lazaiko ao amin'ny lahatsoratro, fa maro ny olona mitsidika tranokala iray avy amin'ny milina maromaro. Miaraka amin'ny PC 4 sy Mac eo anelanelan'ny olon-dehibe 2, raha mitsidika tranokala mitovy amin'ny milina rehetra ianao, dia ho hita ho 'vahiny tokana' 5 ianao fa tsy 2.5! Ary raha mamafa cookies tsy tapaka toy ny 30%+ amin'ny mponina ianao, dia lasa mpitsidika tsy manam-paharoa mihoatra ny 12.5 izany.
Araka ny nolazaiko, tsy mino aho fa hosoka izany… fa diso tafahoatra izany. Manaporofo izany ny ankohonanao.
Jun 9, 2007 ao amin'ny 11: 22 PM
Avereno mamaky ny lahatsoratra sy ny valinteninao indray…marina ny anao. Diso fahazoako ny hevitrao tany am-boalohany. Misaotra nanazava.
Raha lazaina izany dia marina ny gautam—mihamaro ny olona mampiasa cookies flash, na dia tsy manana antony hafa hanolorana flash aza izy ireo. Tsiambaratelo kely maloto: tsy azonao (mora) ny mamafa ny cookies napetraka ao amin'ny flash-nao.
(Tsy manolotra flash be loatra ny Google. DoubleClick no…)
Raha te-hadio amin'ny mpanao dokam-barotra ny tranokala dia mila mangarahara bebe kokoa momba ny impiry ny zavatra nojeren'iza, ary oviana.
Koa satria tsy mahay amin'izany ny rakitra log, dia mila angon-drakitra maro ao anaty angon-drakitra izy ireo. Angon-drakitra tena lehibe.
Satria tsy ho tanteraka izany, ny hevitra tsara indrindra, araka ny voalazanao, dia ny mifantoka amin'ny vokatra!